Yintoni i-GDPR | Iintaba ezinkulu, iJizera ezintabeni, iParadesi yaseBohemi
GDPR - Umgaqo-nkqubo woKhuselo loLwazi jikelele. I-Regulation Jikelele Ukukhuselwa Data Personal (IsiNgesi General Data Protection Regulation, GDPR ungayiqondiyo), igama epheleleyo iPalamente yaseYurophu kunye neBhunga (EU) No. 2016 / 679 27 of. April 2016 kukhuseleko abantu malunga nokulungiswa kwedatha buqu kwi intshukumo ekhululekileyo data kwaye echithiwe Directive 95 / 46 / EC (uMmiselo Jikelele Ukukhuselwa Data Personal) kungummiselo Union European, leyo ijolise ekwandiseni kukhuseleko lwe-data zobuqu kwabemi kakhulu. Kwaye kwaziswa kwiNgxelo Yomthetho ye-European Union kwi-27. Epreli 2016.
Isihloko kunye neenjongo - Misela imithetho malunga nokukhuselwa kwabantu ngabanye ngokubhekiselele ekusebenziseni idatha yabo kunye nemithetho ekuhambeni kwedatha yomuntu siqu. Ummiselo ukhusela amalungelo kunye nenkululeko yabantu abasemgangathweni ilungelo lokukhuselwa kwedatha yomuntu. Ukuhamba ngokukhululekileyo kwedatha yomuntu siqu kwiYurophu YaseYurophu ayinqatshelwe okanye ayivunyelwe ukukhuselwa kwabantu ngabanye malunga nokucwangciswa kwedatha yomuntu siqu.
Ubume bezinto - Ummiselo usebenza kwi-automated processing of personal data kunye nokucwangciswa okungekho ngokuzenzekelayo kwedatha yomuntu siqu equkethwe kwiirekhodi okanye ezo zirekhodwe. Ummiselo awusebenzi ekusebenzisweni kwedatha yomuntu siqu ngokuthi:
ekwenzeni imisebenzi engekho phantsi komthetho weManyano;
AmaLungu angamaLungu ekusebenzeni imisebenzi ewela ngaphakathi kweSihloko V seSahluko 2 seTyiteli ye-EU;
umntu ongowomntu ngexesha lobuqu okanye imisebenzi yasekhaya;
amagosa asemgangathweni ngenjongo yokuthintela, uphando, ukufumanisa okanye ukutshutshiswa kwezonyango zolwaphulo-mthetho okanye ukuhlawulwa kwezohlwayo zolwaphulo-mthetho, kubandakanya ukukhuselwa kunye nokuthintela ukongelo kulondlo loluntu.
Ukuqhutyelwa kwedatha yomuntu siqu ngamaziko, amaziko, iiofisi kunye nee-arhente zeNyunyana zilawulwa phakathi kweMimiselo (EC) Akukho 45 / 2001. UmGaqo-nkqubo (EC) Akukho 45 / 2001 kunye nezinye izenzo zomthetho zeNyunyana ezinxulumene nokuchithwa kweenkcukacha zomntu ngokwazo zihambelana nemimiselo nemigaqo yalo Mgaqo phantsi kweSiqendu 98. Ummiselo awukho ngaphandle kokuchasisa isicelo se-2000 / 31 / EC.
Ulwazi lomntu - Ummiselo ucacisa kwaye uwandise ubungakanani kunye nencazelo yedatha yomuntu siqu. Ulwazi lomntu siqu naluphi na ulwazi malunga nomntu oqhelekileyo ochongiweyo okanye ochongiweyo. data zobuqu ngoko umz. Data kwi iqumrhu elisemthethweni (abaqeshwa balo sele kodwa yebo), iinkcukacha kubantu oswelekileyo, akukho lwazi ukuba umntu othile hayi ukuchonga (umz. a Kuphela igama eliqhelekileyo kunye nefani) kwaye idata yobuqu akukho data engaziwa, ke ezo ziqulethe ukuchongwa komntu kodwa zazisuswa kuloo mpawu. Ngokuphambene nomsebenzi wangaphambili, umyalelo uquka iidilesi ze-IP ezinamandla okanye ezinye iinkcukacha ezibonakalayo phakathi kwedatha yomuntu.
Imbopheleleko - Ummiselo unyanzelekile ngokupheleleyo kwaye usebenza ngokuthe ngqo kuwo onke amazwe aseLungu.
Ukususela kumxholo - Ummiselo uchaza imigaqo yokucwangciswa kweenkcukacha zomntu kunye neemeko zokubambisa umthetho. Ikwalawula kwakhona imigaqo yokubonakalisa kwemvume enikwe ukuqhutyelwa kwedatha nokubonelelwa kolwazi kunye nokufikelela kwidatha yomuntu siqu.
Amalungelo omxholo wedatha - Ukongeza, isihloko sedatha sinamalungelo alandelayo:
i-erasure (ilungelo lokulibala)
GDPR kwiCzech Republic - Ngokutsho ngeziphumo seSigqeba wayengekho kodwa ekupheleni konyaka 2017 ukulungela abarhwebi ukuba GDPR phezulu, eminye yemisebenzi emitsha kummandla wedwa babengazi. Ukuqaliswa kwe-GDPR akufanele kuthathe ngaphezu kwenyanga kubanini-shishini.
Kwizikolo, ukuzisa i-GDPR kuthetha ukufumana imvumelwano efanelekileyo kuba ngaba abazali abathile benganiki imvume yabo, baya kunciphisa ukunikezelwa kwesikolo, kuya kufuneka basebenzise ukuphuma kwamanye amazwe kwaye ezinye iiklasi aziyi kuboniswa. Imvume yabazali ingadinga ukufunwa, umzekelo, kwiimeko apho umntwana ephumelela ukhuphiswano lweemathematika kwaye avunyelwe ukuthatha iifoto, imvume yommeli womthetho ngokupapashwa kweziphumo zokhuphiswano kunye nezithombe zompumelelo. Ukukhuselwa kwedatha yomuntu siqu kwizikolo akukona nje ngamagama abantwana, kodwa nangamagama wabazali babo. Kukho umngcipheko ukuba iintloko zesikolo ziya ku soloko ziloyiko lokuba nento engalunganga.
Umthetho oqulunqwe ngumthetho wokucwangciswa kwedatha yomuntu, evunyiwe nguRhulumente, usenza ukuba sivumele imvume yokucwangciswa kwedatha ngaphandle kwemvume yabazali kubantwana be-15 iminyaka. Imodeli yasekuqaleni yabalwa i-13 iminyaka kodwa yanyuswa kwi-Initiative ye-Ofisi ye-Personal Data Protection. Imanyano yabasebenzi kunye neemanyano zabasebenzi baye bafuna inqwelo ye-16 iminyaka.
Ukukhuselwa kwedatha ebhaliweyo kwizibhedlele, izikolo kunye noomasipala kufuneka zilawulwe ngumthunywa okhethekileyo. Ekupheleni kukaSeptemba, i-2017 yayingacaciswanga koomasipala, iiofisi kunye namafemu ukuba umsebenzi womkomishinala uza kubheka njani ukuba banako ukuchitha kunye nendlela abaza kuthatha ngayo imali yabo.
Uqikelelo olusisigxina lweendleko zee-ogijimenti zokusebenza zii-600 yezigidi zithsaba, iindleko ezongezelelweyo ziya kuchitheka kwi-analytics yombono, iikhomputha ezintsha ze-trustees kunye ne-software. Ngenxa yokuba kunqongophala kwabasebenzi abaqeqeshiweyo, kunokwenzeka ukuba basebenzise inzuzo yokuba enye ingcali inokusebenza kwiiholo ezininzi zedolophu, kodwa kunokwenzeka ukuba oomasipala abakhulu abanako ngokwaneleyo kwaye badinga ngaphezulu. UMphathiswa weNgaphakathi ucebisa ukuba umkomishinala omnye asebenze ubuncinane oomasipala abalishumi.
tags: gdpr, Umgaqo-jikelele woKhuselo loLwazi, khuselo lwa bucala, umthetho wabucala
Iposi yangaphambili Krkonoše spring 2018 ifoto
Inqaku elilandelayo Iintaba ezinkulu ze-2018
ukushiya impendulo Rhoxisa impendulo
Ndixelele ngamaphupha amatsha nge-imeyile.
Ndixelele ngezithuba ezintsha nge-imeyile.